Ifekthri Yomshini Wokuhlola Umhlaba Wonke Wama-elekthronikhi - Abakhiqizi Bemishini Yokuhlola I-Electronic Universal yaseChina, Abahlinzeki
I-YAW-300C Uhlobo Lomshini Wokuhlola Ozenzakalelayo We-Flexural futhi Ocindezelayo
Umshini wokuhlola i-YAW-300C ozenzakalelayo oguqukayo nocindezelayo uyisizukulwane esisha somshini wokuhlola ingcindezi osanda kuthuthukiswa yinkampani yethu.Isebenzisa amasilinda amabili amakhulu namancane ukuze kuzuzwe amandla okucindezela usimende kanye nokuhlolwa kwamandla okuguquguquka kukasimende.
I-WEW uchungechunge lwe-Microcomputer Screen Display Hydraulic Universal Testing Machine
I-WEW uchungechunge lwesikrini se-microcomputer umshini wokuhlola i-hydraulic universal usetshenziselwa ikakhulukazi ukushuba, ukucindezela, ukugoba nokunye ukuhlola kokusebenza kwemishini kwezinto zensimbi.Ngemva kokwengeza izesekeli ezilula, ingahlola usimende, ukhonkolo, izitini, amathayili, irabha kanye nemikhiqizo yazo.
Injini eyinhloko inama-uprights amabili, izikulufu zokuhola ezimbili, nesilinda esingezansi.Isikhala esiqinile sitholakala ngenhla kwenjini eyinhloko, futhi indawo yokuhlola yokucindezelwa nokugoba itholakala phakathi kwenduku ephansi yenjini eyinhloko nebhentshi lokusebenzela.
I-WE ewuchungechunge lwedijithali yomshini wokuhlola i-hydraulic universal hydraulic isetshenziselwa ikakhulukazi ukuqina, ukucindezela, ukugoba nokunye ukuhlolwa kokusebenza kwemishini kwezinto zensimbi.Ngemva kokwengeza izesekeli ezilula, ingahlola usimende, ukhonkolo, isitini, uthayela, irabha kanye nemikhiqizo yayo.
Umshini Wokuhlola Ukuqina Wendandatho Yepayipi ye-WDWG Microcomputer
Lo mshini wokuhlola ufanelekile ukuqina kwendandatho, ukuguquguquka kwendandatho nokuhlolwa kwe-flatness yamapayipi ahlukahlukene.Lolu chungechunge lwamathuluzi okulinganisa nokulawula luphinde lube nokusebenza okuzinzile, imisebenzi enamandla, futhi isofthiwe eyakhelwe ngaphakathi ingalandwa futhi ithuthukiswe.
Umshini Wokuhlola Ukuqina Kwepayipi Lendandatho ye-WDG Digital Display
Umshini wokuhlola ukuqina kwendandatho yepayipi yokubonisa idijithali ifanele ukuqina kwendandatho, ukuguquguquka kwendandatho nokuhlolwa kokucaba kwamapayipi ahlukahlukene.Ngokwezidingo ezikhethekile zabasebenzisi, kungandisa futhi imisebenzi emithathu yokuhlola yomshini wokuhlola wendawo yonke (okungukuthi, ukushuba, ukucindezelwa, ukugoba).